Enintaona ny #NiUnaMenos: Ireo fandresena sy fitakiana vaovao an’ny hetsika feminista ao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Fivoarahana manao ahoana no nentin'ny hetsika feminista ao Arzantina hatramin'izao?
Voadika ny 02 Aogositra 2021 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, বাংলা, Português, Français, Español
Afisin'ny lisitry ny fitakiana navoaka tamin'ny tsingeritaonan'ny Ni Una Menos tamin'ny 3 Jona 2021, nahazoana alalana.
Nomarihan'ny fanentanana Ni Una Menos (“Tsy hisy [vehivavy] na iray aza ho tavela”) tamin'ny 3 jona ny tsingerintaonany fahenina, hetsika feminista iray nanomboka tao Arzantina ary niely haingana nanerana an'i Amerika Latina sy ny mihoatra izany.
Tamin'ny 3 jona 2015 no nifanaiky ireo fikambanana feminista mihoatra ny 200 ao Arzantina hametraka fitakiana vaovao eo ambany tarigetra “Tadiavinay ny ho velona, afaka ary mahaleotena!” Efa nitombo amin'izao fotoana izao ny fifantohana ka mahatafiditra ny zon'ny vehivavy ara-toekarena sy ara-pitsarana (lalàna), ary efa noraisin'ny hetsika ihany koa amin'izao fotoana izao ny fomba fijery LGBTI+.
Tombokasa maro no efa niainga hatramin'izany andro voalohan'ny jona izany rehefa nifamory tamin'ny tanàna mihoatra ny 80 ny vehivavy ho fanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny famonoana azy (ho faty). Fa ilay nanomboka ho hetsika nasionaly eo ambany fanevan'ny Ni Una Menos no nitombo haingana ho hetsika rezionaly sy manerantany.
Tao amin'ny media sosialy no nanomboka tamin'ny voalohany ny hetsi-panoherana, nialoha ny nianahany ho eny an-dalamben'i Arzantina ho fanamelohana ny famonoana an'i Chiara Páez, zazavavy 14 taona novonoin'ny sipany, Manuel Mansilla, 16 taona. Nanomboka tamin'io fotoana io ny hetsika Ni Una Menos nanorina ny fanorenany hanatontosana tombokasa.
Tafiditra anatin'izany ny fananganana ny Rejisitry ny famonoana vehivavy, natsangan'ny Fitsarana Tampony ao Arzantina ny ampitson'ny hetsi-panoherana voalohany. Hita amin'ny tombokasa hafa ny Foibem-panoratana, fampivondronana ary fanaraha-maso ny famonoam-behivavy, novelomin'ny Sekretarià misahana ny Zon'Olombelona ao Arzantina. Tanjon'ny Foibe ny hitazona rakitra maro tsy asiana fitongilanana amin'ny trangan-kerisetra atao amin'ny vehivavy hanangonana antontanisa sy hamakafakana ny raharaha, izay mety ho azo ampiasaina rehefa avy ny fotoana hanolorana vahaolana.
Pikantsary avy amin'ny El Siglo tamin'ny dia hanoherana ny famonoana vehivavy tao Buenos Aires, Arzantina, tamin'ny 3 Jona 2015.
Tamin'ny Novambra 2015, natsangana ny Biraon'ny Mpahay Lalàna ho an'ireo Lasibatry ny Herisetra an-Tokantrano (Gender Violence) noho ny fitakiana nataon'ny hetsika Ni Una Menos. Hita ao amin'izany Birao izany ireo Mpahay Lalàna manampahaizana manokana amin'ny zon'ny vehivavy izay manolotra fisoloantena ara-pitsarana maimaimpoana ho an'ireo lasibatry ny herisetra an-tokantrano sy ny fanararaotana ara-nofo.
Na dia tena mbola mampatahotra be ihany aza ny tarehimarika ao Arzantina — vehivavy iray nisy namono isaky ny 35 ora — nampisy aingam-panahy ho an'ireo hetsika hafa ny fitomboan'ny fanentanana sy fanazavana momba ity herisetra sy famonoana ho faty vehivavy ity, ka nanjary nahatontosana zavatra maro hafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiharana ny Lalàna Micaela tamin'ny Desambra 2018, izay mametraka ny tsy maintsy hanaovana fanarazan-tena miompana amin'ny olana sy herisetra mianjady amin'ny vehivavy ho an'ireo olona rehetra miasa any amin'ny servisim-panjakana. Manampy izany, najoron'ny governemanta ny Minisiteran'ny Vehivavy tamin'ny Desambra 2019, izay manana tanjona hisolo tena ny vehivavy sy ireo vondrona vitsy an'isa ao amin'ny politikam-panjakana. Avy eo, tamin'ny Desambra 2020, nolanian'ny mpanao lalàna ao Arzantina ny fametrahana ho ara-dalàna ny fanalan-jaza, fitakiana lehibe avy amin'ny Hetsika Ni Una Menos.
Afisy #NiUnaMenos, sary nampindramin'ny foto Estela Fares.
Efa hita ao amin'ny notinakin'ny hetsika amin'izao 2021 izao ny lalàm-pirenena fitsinjarana fetr'isa eo amin'ny sehatry ny asa sy hampidirana ireo olona nanova fahananahana, fampitomboan-karama sy tambiny ho an'ny vehivavy mpiasa ho enti-miady amin'ny krizy ara-pahasalamana sy krizy ara-toekarena ao amin'ny firenena, fanavaozana ny lalana mifototra amin'ny lahy/vavy sady feminista izay handravona ny hantsana eo amin'ny politikam-pirenena sy ny zavamisy iainan'ny vehivavy sy ny LGBTI+.
Manampy izany, nanao antso ny fiaraha-mientana Ni Una Menos hanao afisy ho avelatra manerana ny firenena, tigetra hozaraina amin'ny tambajotra sosialy na hatao printy ka ho ahantona amin'ny varavarana sy ny varavarankely, ahafahana manatontosa androm-pikatrohana tsy mandrava ny fameran'ny COVID-19.
“Novoizinay ity onja feminista ity, ity fananganana fiaraha-manangona izay nanova ny fiainanay ity, tao anatin'ny enintaona,” hoy ny nosoratan'ny hetsika tao amin'ny pejy Instagram. “Nahatonga antsika ho tafaraka ny tolona feminista, nahita antsika sy nizàka antsika. Tiantsika rehetra ny halalaka kokoa, velona kokoa, ary mahaleotena kokoa.”